गाउँका बुढापाका किन सधै तगडा ? – KhabarKhurak
तेस्रो कुरा हो, उनीहरुको परिश्रम । गाउँले जीवन सधैंभरी सक्रिय हुन्छ । त्यसैले उनीहरुको जीवन बुढ्यौली समयसम्म पनि सक्रिय भइरहन्छ । झुत्रो कपडा लगाएर छाप्रोमा बस्नेहरुको खुशी महलमा बस्नेहरुको भन्दा धेरै गुणा बढी हुनसक्छन् । कारण यही हो कि छाप्रोमा बस्नेहरुको सपनाले आकाश छोएको हुँदैन । जे सम्भव छ त्यही नै उसको कल्पनाको परिधिभित्र हुन्छ । तर, महलमा बस्नेहरुको घरसँगै सपनाले पनि महल छोएको हुन्छ । सोही कारण उनीहरुको दुख पनि अधिक हुने गर्छ ।
यही जीवनशैलीका कारण नै गाउँले जीवन बिताइरहेकाहरु चौरासी कटिसक्दा पनि उत्तिकै फूर्तिला देखिन्छन् । यसको राज भनेको नै दैनिक कार्यक्षेत्रमा हुने व्यायाम, स्वच्छ हावा, ताजा र पौष्टिक खानेकुराहरु नै हुन् ।
आँखाले मात्र होइन मनैले भन्यो आहा ! बन्दीपुर ।
६५ वर्ष सम्म बच्चा जन्माउन सक्ने यी महिला
नारायणी नदीमा पानी जहाजको परिक्षणले सफलता हासील गर्‍यो
जमिनमा सबैभन्दा गहिरो स्थान एन्टार्कटिका
के कुरामा सधै गोपनियता अपनाउनुपर्छ ?
अभिभावकले बच्चालाई सानैदेखि सिकाउनैपर्ने कुराहरू
बालबालिकामा व्यवहार परिवर्तन